Dadaalada Soomaalida iyo diidmada Sweden | Somaliska
Soomaalida Sweden ku nool oo bilawday dadaal midaysan oo ay kaga
soo horjeedaan go’aankii maxkamadda laanta socdaalku sanadkaan bilawgiisii soo rogtay .
Soomaaliya ku dhawaad mudo 20 sano ah kama jirin dawlad awood u leh in ay soo saarto aqoonsi lagu kalsoonaan karo, taasina waxay horseeda in aan dunada inteeda badan laga xushmayn dokomiintiyada Soomaaliya. Dawladda Sweden waxay ka mid taha dawladaha aan aqoonsanayn baasaborka iyo dhamaanba dokomiintiyada Soomaliga ah, taasi badalkeedna waxay dadka soomaalida ah dalkugalka ku siin jirte baasaboor loogu tala galay dadka ajaanibta ah ee aan haysan aqoonsi wadanka ay u dhasheen ah (främlingspass).
Taas waxaa is badal ku dhacay sanadkaan horaantiisii markii maxkamadda laanta socdaalka Sweden dadka shisheeyaha ah ku soo rogtay in ay codsigooda soo raaciyaan cadaymo Sweden laga aqoonsanyahay, waxaa dadka soomaalida ah ku adkaatay in qoysaskoodii soomaaliya ka jiraya daganaashiyo Sweden ay ka helaan. Tan iyo markii uu dhaqan galay go’aankaasi waxaa socday dadaalo badan oo ay wadaan jaalaiyadaha somaalida qaarkood iyo dadka u dhaq-dhaqaaqa xuquuqda aadamaha waxaana hada socda dadaalkii ugu balaarnaa, oo arinkaan looga soo horjeedo. Dadaalkaan oo lagu xoojinayo dhamaan dadaaladii horay u socday waxaa wada dhalinyaro iskood isku xilqaamay waxaana qorshu yahay in soomaalida arintaan hal dhinac iska taagto. Dadweynaha soomaaliyeed ee ku nool Sweden ayaa waxaa laga codsaday in aymagacayadooda, Personnu mmer-kooda iyo saxiixooda oga qaybqaataan wax ka qabashda xaalada qalafsan ee ay ku soganyihiin soomaalida wadankaan dagan. “Xaq baan u leenaha in aan qoysaskeena la midoowno oo aan hal meel kuwada noolaano taasina waxaan ku gaari karnaa in aan midoowno oo aan hal dhinac ka soo wada jeesano si sharci ah na xaquuqdeena ku raadsano anaga oo midaysan” sidaas waxaa yiri Bashiir Cabdi oo ka mid dhilinyarada u istaagay midaynta dadaalada soomaalida. Qorshaha ayaa ah in la uruuriyo magacyada dadka Soomaaliyeed ee carurtooda ay ka maqanyihiin ka dibna loo qabto looyar matala oo arinta la kora maxkamadaha Sweden iyo maxkamadaha caalamiga ah sida Maxkamada Xuquuqul Insaanka ee Midowga Yurub. Foomamka magacyada lagu diiwaan galinayo waxaa la gaarsiin doonaa dhamaanba goobaha soomaalidu ku badanyihiin waxayna fursad u heli doonaan in ay saamayn ku yeeshaan go’aamada Soomaalida daganaashiyaha loogu diiday. Dadaaladaan waxaa qeyb ka ah wakiilka Somaliska.com ee magaalada Uppsala Siciid Cabdi Cusmaan halkaan ka daawo asagoo wareysi siinaya East African TV. Wixii faahfaahin dheeri ah waxaad kala xiriir kartaan telefoonada kala ah Bashiir Cabdi (Stockholm) 0767118788 iyo Siciid Cabdi Cusmaan 0700414465 (Uppsala).
Foomka la buuxinayo halkaan ayaad kala bixi kartaa. RIIX HALKAAN
Ama waxaad ku soo diri kartaan foomka oo buuxa cinwaanka Bashir Daud Bergengatan 5 164 37 Kista Adreeska Qareenka: Juristbyrån Wallnerström & Göthe AB Osbyringen 22, 16373 SPÅNGA (Stockholm)
Dadaalada Soomaalida iyo diidmada Sweden
Taas waxaa is badal ku dhacay sanadkaan horaantiisii markii maxkamadda laanta socdaalka Sweden dadka shisheeyaha ah ku soo rogtay in ay codsigooda soo raaciyaan cadaymo Sweden laga aqoonsanyahay, waxaa dadka soomaalida ah ku adkaatay in qoysaskoodii soomaaliya ka jiraya daganaashiyo Sweden ay ka helaan.
Tan iyo markii uu dhaqan galay go’aankaasi waxaa socday dadaalo badan oo ay wadaan jaalaiyadaha somaalida qaarkood iyo dadka u dhaq-dhaqaaqa xuquuqda aadamaha waxaana hada socda dadaalkii ugu balaarnaa, oo arinkaan looga soo horjeedo. Dadaalkaan oo lagu xoojinayo dhamaan dadaaladii horay u socday waxaa wada dhalinyaro iskood isku xilqaamay waxaana qorshu yahay in soomaalida arintaan hal dhinac iska taagto.
Dadweynaha soomaaliyeed ee ku nool Sweden ayaa waxaa laga codsaday in aymagacayadooda, Personnu mmer-kooda iyo saxiixooda oga qaybqaataan wax ka qabashda xaalada qalafsan ee ay ku soganyihiin soomaalida wadankaan dagan. “Xaq baan u leenaha in aan qoysaskeena la midoowno oo aan hal meel kuwada noolaano taasina waxaan ku gaari karnaa in aan midoowno oo aan hal dhinac ka soo wada jeesano si sharci ah na xaquuqdeena ku raadsano anaga oo midaysan” sidaas waxaa yiri Bashiir Cabdi oo ka mid dhilinyarada u istaagay midaynta dadaalada soomaalida.
Qorshaha ayaa ah in la uruuriyo magacyada dadka Soomaaliyeed ee carurtooda ay ka maqanyihiin ka dibna loo qabto looyar matala oo arinta la kora maxkamadaha Sweden iyo maxkamadaha caalamiga ah sida Maxkamada Xuquuqul Insaanka ee Midowga Yurub.
Foomamka magacyada lagu diiwaan galinayo waxaa la gaarsiin doonaa dhamaanba goobaha soomaalidu ku badanyihiin waxayna fursad u heli doonaan in ay saamayn ku yeeshaan go’aamada Soomaalida daganaashiyaha loogu diiday.
Dadaaladaan waxaa qeyb ka ah wakiilka Somaliska.com ee magaalada Uppsala Siciid Cabdi Cusmaan halkaan ka daawo asagoo wareysi siinaya East African TV.
Wixii faahfaahin dheeri ah waxaad kala xiriir kartaan telefoonada kala ah Bashiir Cabdi (Stockholm) 0767118788 iyo Siciid Cabdi Cusmaan 0700414465 (Uppsala).
Ama waxaad ku soo diri kartaan foomka oo buuxa cinwaanka Bashir Daud Bergengatan 5 164 37 Kista
Adreeska Qareenka: Juristbyrån Wallnerström & Göthe AB
Osbyringen 22, 16373 SPÅNGA (Stockholm)
Magangalyo doonka oo lagu eedeeyay tuuganimo iyo dagaal
50 arimood oo lagu gaaro guur farxad leh. Qaybta 2-aad
Ramadan kareem. Bari Waa La Soomayaa!!!
Xagee marayaan dadaalada Soomaalida | Somaliska
[…] us Warka aad loo akhristo Dadaalada Soomaalida iyo diidmada Sweden Rajada Soomaalida iyo wararka laysla dhexmarayo Tirada dadka magangalyo doonka oo siyaaday iyo […]